Maine Coon | Bisadaha Noti
Haddii aad raadineyso bisad caan ah oo kalgacal leh oo iyaduna ka weyn tan reer Yurub isla markaana u eg libaax yar, ma weydiisaneysid wax aan macquul aheyn 🙂. Waxaa jira nooc la kulma wax kasta oo aad weydiisato, waana bisadda Maine Coon.
Iyada oo culeyskiisu yahay 11kg (lab ah), dhogortaani qaaliga ah waxay leedahay muuqaal ka dhigaya qoyska oo dhan jacayl, ha ahaadaan carruurta, waayeelka ama dadka waaweyn.
1 Asalka iyo taariikhda Maine Coon
2.1 Midabada midabka
2.1.1 Coon maine madow
2.1.2 Coon maine cad
2.1.3 Maine Coon cawl
3 Waa maxay dabeecaddiisu?
4 Waa maxay daryeelka ay u baahan tahay?
4.5 Xannaanada xoolaha
5 Waa imisa qiimaha Maine Coon?
Asalka iyo taariikhda Maine Coon
Maine Coon, oo ah bisadaha weyn, Waa nooc asal ahaan ka soo jeeda Mareykanka, gaar ahaan Maine. Laakiin runtu waxay tahay inuusan si fiican u aqoon waxa sheekadiisu tahay, maadaama ay jiraan aragtiyo badan oo ku saabsan, qaar ka macquulsan kuwa kale:
Waxaa jira halyeey dib ugu laabta 1793, oo ka sheekeynaya sheekada Kabtan Samuel Clough, oo dhalasho ahaan ka soo jeeda Wiscasset (Maine), oo boorsada ku sidda boqoradda Marie Antoinette Sally, halkaas oo bisad laga helay.
Waxaa jirta sheeko la sheegay in Viking-ku ay ahaayeen kuwii ugu horreeyay ee yimaada Ameerika, ayna la socdeen bisado bisadda ka ilaalinayay.
Aragtida ugu macquulsan ayaa sheegeysa inay runti tahay iskutallaab u dhexeysa bisadaha timo dhaadheer (sida angora) iyo bisadaha duurjoogta Mareykanka.
Noqo sida ay doonto ha noqotee, 1953-kii Central Maine Coon Cat Club ayaa laga abuuray Maine, taas oo u adeegi doonta inay caan ku siiso mid ka mid ah bisadaha ugu caansan adduunka.
Sida laga soo xigtay Xiriirka Caalamiga ah ee Feline, halyeeyadayada waa inay lahaadaan:
Peso: inta udhaxeysa 6,8 iyo 11kg dhanka labka iyo kan udhaxeeya 4,5 iyo 6,8kg.
Jirka: dherer iyo muruq ku daboolan timo gaaban oo madaxa ah laakiin ka sii dheer markay ku sii dhowaanayso dabada.
Madaxa: dhexdhexaad, oo leh dhabanno caan ah.
Dhegaha: dhaadheer oo tilmaaman.
Indhaha: weyn iyo oval, midab kasta oo buluug ah mooyee mooyee Maine Coon cad mooyee.
In kasta oo midabada oo dhan la aqbalo (marka laga reebo midabka midabka, shukulaatada, qorfe, lilac iyo fawn) sanadihii la soo dhaafay waxaa jira baahi badan oo loo qabo in yar oo gaar ah. Mana aha wax kayar: midabka dhogortaadu waa mid aad iyo aad u qurux badan. Kuwani waa:
Coon maine madow
Sawir - InspirationSeek.com
Haddii aad rabto inaad haysato waxoogaa madow oo madow oo leh timo nus-dheer ah, tani shaki la'aan waxay noqon kartaa saaxiibkaa cusub ee dhogorta leh.
Coon maine cad
Haddii, liddi ku ah, aad rabto inay yeelato dhogor cad-baraf cad, kani waa dhogortaada 🙂.
Maine Coon cawl
Grey waa midab aad u qurux badan, kaas oo siiya doofaarka muuqaal qarsoodi ah, oo xasaasi ah.
Bridle waa qaabka ugu da'da weyn. Waxay noqon kartaa midab cawl ah ama midab liin ah.
Waa maxay dabeecaddiisu?
Noocan bisad Waxay caan ku tahay inay ahaato qof jecel oo aad u jecel. Wuxuu ku riyaaqaa la joogida qoyskiisa aadanaha, ha ahaato daawashada TV-ga ama hareeraha ciyaarta. Dareenkaan, badanaa waa bisad aad u deggan, in kasta oo ay yeelan karto, sida dadka kale ee duurjoogta ah, "xilliyadooda waallida" inta ay bilaabanayso inay ku ordo guriga dhexdiisa ama ay ku ciyaarto biyaha.
Sidoo kale waa, aad u bulshey, aad iyo aad ayey u fududahay in la helo si uu ula jaanqaado xayawaanka kale, sida eeyaha. Laakiin si uu ugu farxo, wuxuu u baahan doonaa in la baro inuu xadhig u baxo iyo suunka, maxaa yeelay wuxuu jecel yahay inuu banaanka u baxo socod (haa, had iyo jeer meelaha xasilloon). Daaran maqaalkan Waxaan sharaxeynaa sida loo helo.
Waa maxay daryeelka ay u baahan tahay?
Maine Coon waa inuu helaa taxane ah daryeel maalinle ah si caafimaadkiisa iyo farxadiisa loo damaanad qaado. Waxay kala yihiin sidan soo socota:
Waxa ugu badan ee lagu taliyay waa midkoodna sii quudin tayo sare leh ama doorto cunto dabiici ah sida Yum, Summum ama Barf Diet. Haddii aad doorato tan dambe, waxaan kugula talineynaa inaad caawimaad ka codsato nafaqeeye ku takhasusay nafaqada doofaarka, sababtoo ah haddii aad si khaldan u sameyso waxay halis gelinaysaa caafimaadka xoolaha.
Timahooda waxaa la cadaydaa laba jeer maalintii inta lagu gudajiro waqtiga daadinta, iyo hal mar maalintii sanadka intiisa kale. Burush adag oo birta ah ayaa loo isticmaali karaa tan, iyo FURMIYE, kaas oo ka saari doona dhammaan timaha dhintay.
Toddobaadkiiba hal mar dhegaha waa in lagu nadiifiyaa faashad nadiif ah (midba dheg kasta) oo lagu qoynayo biyo diirran, iyadoo aan loo sii dhaadhicin.
Laba ama seddex jeer usbuucii, indhaha waa in lagu nadiifiyo faashad nadiif ah (midkoodna il kasta), oo lagu qoynayo faleebo cammile ah. Qaabkan, marka lagu daro nadiifintooda, halista infekshinka waa la yareyn doonaa.
Inkasta oo aad seexan doontid inta u dhexeysa 16 ilaa 18 saacadood, markaad soo jeeddo waxaad u baahan doontaa inaad ciyaarto, dhaqaaqdo, oroddo. Kaliya maahan inay tahay wax aad u baahan tahay inaad taam ahaato, laakiin sidoo kale aad ayey muhiim u tahay inaad u sameyso si aad u yareyso halista aad ku noqon karto niyad-jab.
Sababtaas awgeed, maalin kasta waa inaad maalin walba waqti ku bixisaa oo aad la ciyaarto, adoo adeegsanaya wax kasta toy Bisad taas oo laga heli karo iibka dukaamada xayawaanka, sida xayawaanka cufan, kubadaha ama ulaha.
Waxay u muuqan kartaa wax macquul ah, laakiin waxaan u maleeyay inay ku habboon tahay in lagu daro maxaa yeelay mararka qaarkood waa kiiska in xayawaan la helo, xaaladdan bisad, ka dibna waa la iska indhatiraa. Runtii, aad iyo aad ayey muhiim u tahay ka hor intaadan go'aansan inaad guriga dhogorta u keento, la hadal qoyska si dhibaatooyinku aysan mar dambe u soo kicin, haddii kale wada noolaanshuhu uma fiicna doono qofna, ugu yaraan bisadda.
Mawduuc kale oo aan jeclaan lahaa inaan ka hadlo waa booqashooyinka. Haddii aan uga tagno bisadda oo ku xiraneysa qol markii qof yimaado si uu na arko, waxa kaliya ee aan ku guuleysaneyno ayaa ah inay dadka ka careysiiso. Sidaas darteed, waxaad u baahan tahay inaad nala joogto inta ugu macquulsan si aad markasta u dareento dhiirigelin iyo farxad.
Maine Coon guud ahaan waa nooc caafimaad ahaan wanaagsan. Si kastaba ha noqotee, waxaa lagugula talinayaa inaad geysid dhakhtarka xoolaha si aad uhesho tallaalada lagama maarmaanka ah, qoyaan ama ku shahwo da'da 5-6 bilood, oo u qaado si joogto ah loo hubiyo maadaama ay tahay nooc ay yeelan karto hip dishibiliinka.
Waa imisa qiimaha Maine Coon?
Ma jeceshahay inaad kula noolaato Maine Coon? 'Raaxadan' jilicsan 'waa xayawaan shaki la'aan kaa dhigi doonta inaad ku qaadato daqiiqado aad u qosol badan, kuwa kalena jilicsan. Laakiin waa inaad maskaxda ku haysaa in qiimuhu ku dhow yahay 900 euros haddii aad qorsheyneyso inaad ku kasbato meel wax lagu gaadho.
Haddii aad rabto inaad aragto sawirro badan oo ka mid ah Maine Coon, halkan waa inaad tagtaa:
Wadada buuxda ee maqaalka: Bisadaha Noti » Bisadaha » Maine Coon
Dabeecadda dhallinta qaangaarka ah